China L-Valine Powder fekitori uye vagadziri | Tianjia
1. L-Valine yakakosha amino asidhi yekuwedzera kwekuziva mashandiro uye kutsetsenura hunyanzvi system fuction.
2. L-Valine inodikanwawo kuti tsandanyama metabolism, kugadziriswa kwetishu uye kugadziriswa kweiyo chaiyo nitrogen muyero mumuviri.
3. L-Valine inowanikwa mumatunhu akanyatsoiswa mumatumbu etsandanyama.
4. L-Valine zvakare yakanaka kugadzirisa mhando yekushomeka kweamino acid iyo inogona kukonzerwa nekupindwa muropa nezvinodhaka.
Valine chinhu chakakosha uye chakakosha kunguruve nehuku seLysine, theonine, methionine uye tryptophan. In
mafomula anoshanda eEuropean, inowanzoonekwa seyechishanu inogumira amino acid. Sezvo isingakwanise kuunganidzwa mumuviri, inoda kuwedzerwa kubva kuzvikafu. Valine is a branched chain chain amino acid pamwe neleucine uye isoleucine, inobatanidzwa mumabasa mazhinji akakosha ehupenyu. Inogona kubatsira kunatsiridza mukaka goho rekuyamwisa kudyara uye kuwedzera mhuka kuzvidzivirira.
2.Zvekudya Giredhi Valine:
L- valine is a branched cheni amino acid, pamwe neleucine uye isoleucine, izvo zvakakosha kugadzirisa zvinyama, zvinowanzoita glucose yeropa uye zvinopa simba kumuviri wemunhu, kunyanya kune simba rekurovedza muviri. Naizvozvo, inogona kushandiswa kunwa mitambo. Kunze kwezvo, Valine inogona zvakare kushandiswa seyakawedzera chikafu mubheka kuti uvandudze kunaka kwechikafu.
3.Zve mushonga Giredhi Valine:
Seimwe yeamino acid infusions, valine inogona kushandiswa kurapa chirwere chechiropa. Kunze kwezvo, valine ndeimwe yezvinhu zvekutanga zvekubatanidza mishonga mitsva.
Pashure: NON-GMO Isolated Soy Mapuroteni
Zvadaro: Yakasimba Sweetener Aspartame
Soy Protein Isolated, Ascorbic Acid Powder Bulk, Monk Chibereko Bvisa, Vitamin C Ascorbic Acid Upfu, Yakachena Ascorbic Acid Powder, Aspartame,